साउन महिनामा शिवजीलाई भुलेर पनि चढाउन नहुने ५ पवित्र वस्तु « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ साउन २ गते शुक्रवार प्रकाशित
हिन्दु धर्म र धर्मावलम्बीहरूका अनुसार, जुन ठाउँमा रिती पुर्याएर शिवजीको पुजा गरिँदैन, नियमित शिवजीको पुजा गरिँदैन, त्यो ठाउँमा शिवलि*ङ्ग राख्नुहुँदैन। किनकी, जहाँ शिवजीको अपमान हुन्छ, त्यहाँ ठूलो क ष्ट आइपर्ने धार्मिक मान्यता छ ।भोलेनाथ एकदमै शान्त स्वभावका देवता हुन् र उनलाई सजिलैसँग खुसी बनाउन सकिन्छ। तर, उनको क्रो*धलाई कसैले पनि सामना गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता छ ।
शिव भगवानको जीवन सिद्धान्त एकदमै साधारण छ। सादा जीवन उच्च विचारको दर्शनलाई पछ्याउने देवता हुन् शिवजी। जो मानिस बढि महत्वाकांक्षी हुन्छ, त्यो मानिस कहिल्यै पनि खुसी हुन सक्दैन। जसले आफ्नो इच्छा र चाहनाको धरातलभन्दा गहिरिएर आफैलाई बुझ्ने कोशिस गर्छ, त्यहि मानिसले मात्रै खुसीको स्वाद चाख्न पाउँछ। विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका शिवजीको कथाबाट यहि सिक्न सकिन्छ।
शिवजीलाई मनपर्ने कुरा : शिवजीले सबैभन्दा बढि मन पराउने वस्तुहरू भनेको गाँ’जा, भा’ङ्ग, ध’तुरो, बरफजस्तो चिसो गाईको दूध, श्रीखण्ड र खरानी हुन्। त्यसैले यी कुराहरू चढाउँदा, शिवजी अत्यन्त खुसी हुने धार्मिक मान्यता छ ।
साथै शिवपुराणका अनुसार, भक्तालुहरूले शिवजीको पुजा आरधना गर्दा यी ५ वस्तुहरू कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन, यदि चढाएमा अनर्थ हुने बिश्वास गरिन्छ ।साथै शिवपुराणका अनुसार, भक्तालुहरूले शिवजीको पुजा आरधना गर्दा यी ५ वस्तुहरू कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन, यदि चढाएमा अनर्थ हुने बिश्वास गरिन्छ ।
१. गोलाईँती फूल (केताकी फूल): यो फूलको नाम ठाउँअनुसार फरक पर्ने हुन्छ। मध्यपश्चिमी क्षेत्रतिर यो फूललाई ‘गोलाईँती फूल’ भन्ने गरिन्छ भने तराई क्षेत्रमा यो फूललाई केताकी फूल भन्ने गरिन्छ।
एकदिन, विष्णु भगवान र ब्रह्मादेवको बीचमा को बलियो’ भन्ने विषयमा घमासान यु,द्ध भइरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले एकदमै ख’तरनाक अ,स्त्र प्रयोग गर्न लागे, तब उनीहरूको बीचमा ज्योतिर्लि’ङ्ग बनेर शिवजी प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि शिवजीले विष्णु र ब्रह्मालाई ज्योतिर्लि’ङ्गको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउन आदेश दिनुभयो।
विष्णु देवले पनि शिवजीको आदेश मानी फेद खोज्न हिँडे, तर फेला पार्न सकेनन्। टुप्पो खोज्न हिँडेका ब्रह्मदेवले जुक्ती लगाए र गोलाईँती फूललाई आफुसँगै ढाँट्न आदेश दिए। दुवैजना फर्किए र विष्णुले हार स्वीकारे। तर ब्रह्माले ज्योतिर्लि’ङ्गको टुप्पो फेला पारेको भनी ढाँटे।
गोलाईँती फूल पनि ब्रह्माकै कुरामा सहमत जनाउँदै शिवलाई ब्रह्माले टुप्पा फेला पारेको कुरामा हो हो मिलायो। तर, ब्रह्माले ढाँटेको भनेर शिवजीले थाहा पाइहाल्नुभयो, किनभने उक्त ज्योतिर्लि’ङ्ग अनन्तसम्म फैलिएको थियो। ब्रह्मा र गोलाईँती फूलको त्यो झू’टबाट क्रो’धित शिवजीले ब्रह्माको एउटा टाउको का’टिदिनुभयो र कसैले पनि उनलाई भगवान भनेर पुजा नगरून् भनेर ब्रह्मादेवलाई श्रा’प दिनुभयो। त्यसपछि, शिवजीले गोलाईँती फूलतर्फ फर्केर उनको पुजा गर्दा कहिल्यै पनि सो फूल प्रयोग गर्न नपाऊन् भनेर श्रा’प दिनुभएको धार्मिक कथन छ ।
२. तुलसी : शिवपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार, दै’त्य जालन्धरको व’ध गर्न एकदमै क’ठीन थियो, किनभने उनकी पत्नीको पतिव्रत शक्तिले उनलाई कुनै पनि देवताले हराउन नसक्ने शक्ति दिएको थियो। तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख! जाल न्धर र महादेवको यु’द्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लु’ट्न गए।
जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लु’ट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भ’ष्म बनाइदिएका थिए।आफ्नो पतिको मृ’त्यु र आफूप्रतिको धो’काबाट क्रो’धित तुलसीले महादेवलाई आफ्नो पवित्र पातले कहिल्यै पनि पुजा गर्न नपरोस् भनेर श्रा’प दिन्छिन्। त्यसैले गर्दा नै शिवजीलाई तुलसीको पात चढाउनुहुँदैन भनेर शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
३. नरीवलको पानी: शिवजीलाई चढाउन नहुने पवित्र वस्तुहरूमध्ये नरीवलको पानी पनि एक हो। शिवजीलाई सिङ्गो नरीवल चढाउनु कुनै भूल हुँदैन, तर शिवलि’ङगमा कहिल्यै पनि नरीवल फुटाएर पानी नचढाउनुहोला। शिवपुराणमा, यस्तो गरेमा शिवजी रिसाउने र अनि’ष्ट हुने बिश्वास गरिन्छ।
४. बेसार: बेसारलाई स्त्रीहरूको सुन्दरता बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा नै शिवजीलाई बेसार चढाउन नहुने शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
५. सिन्दूर: विवाहित महिलाहरूको लागि सिन्दूर एकदमै महत्वपूर्ण र पवित्र मानिने गरिन्छ। आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि हिन्दु महिलाहरूले सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गर्दछन्। तर, शिवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुने मान्यता छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम, एकै दिन ८ सय ५९ जनामा संक्रमण पुष
कर्णाली करिडोरको खुलालु लैफु सलीसल्ला खण्डको सकड असार ३१ गते हस्तान्तरण हुने